Igumbi elitofotofo, igumbi lokuhlambela labucala, isidlo sakusasa, iTV
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDorota
Libanzi kwaye ligumbi eliphindwe kabini lale mihla. Yimizuzu emi-2 kuphela yokuhamba ukusuka emlanjeni kunye nemizuzu engama-20-25 uhamba ukusuka kumbindi wedolophu. Indlu esandula ukulungiswa inamagumbi okulala ayi-5 onke anamagumbi okuhlambela abucala, iiTV kumagumbi, kunye nesidlo sakusasa esiziphakeleyo.
Indlu inamagumbi okulala ama-5 kunye namagumbi okuhlambela ayi-5, ama-3 kuwo ayi-en-suite kwaye amagumbi ama-2 (inombolo yesi-3 kunye ne-4) anamagumbi awo okuhlamba abucala phantsi - nceda ubone ezinye izintlu zam. Onke amagumbi axhotyiswe ngokupheleleyo kwaye avuselelwe ngokutsha ngokufikelela kwigumbi lokutyela, iholo kunye nekhitshi kunye negadi engasemva. Eli gumbi lokulala likumgangatho wokuqala, lijonge kwigadi engasemva. Inebhedi ephindwe kabini, i-wardrobe kunye ne-lap top indawo yokusebenza enobuhlobo.
4.68 out of 5 stars from 224 reviews
4.68 · Izimvo eziyi-224
Le ndlu ibekwe kufutshane neendlela ze-Weirs Lane kunye ne-Abington Road nokufikelela ngokulula kwindlela ejikelezayo.
Sibhetyebhetye kakhulu malunga nokutshekishwa kwamaxesha (24/7), kusenokwenzeka ukuba asiyi kuba kufutshane xa ujonga ukungena; uya kuthunyelwa ikhowudi yokutshixa ehlakaniphile onokuyisebenzisa ukuhlala uphela ngaphandle kokuphatha izitshixo zendlu, ukuza nokuhamba njengoko uthanda ngexesha lokuhlala kwakho. Ngenxa yeenkonzo zethu zokucoca jonga ixesha likhethwa phambi kwentsimbi yesi-3pm nangona kunjalo ukuba undazise siya kuzama ukulungiselela into elula ngakumbi kuwe. Endleleni yeholo njengoko ungena kwicala lasekhohlo kukho ibhokisi yesitshixo kunye neeseti zezitshixo zegumbi lakho (akukho: 3), nceda uzishiye kwindawo efanayo xa uhamba. Epasejini kukho izikhokelo zeOxford, iimephu kunye namaphecana avela kwiziko lolwazi lwabakhenkethi akhoyo.
Sibhetyebhetye kakhulu malunga nokutshekishwa kwamaxesha (24/7), kusenokwenzeka ukuba asiyi kuba kufutshane xa ujonga ukungena; uya kuthunyelwa ikhowudi yokutshixa ehlakaniphile on…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oxford